Rakhiyeyaal Shirkado Bacrimiya Isukeenista Shirkado Isukeen iyo Warshad | YiZheng
Is-wadaha Groove Composting Turner Mashiin waxaa badanaa loo yaqaan 'Rail Rail compost Turner', track track compost Turner, jeedo mashiinka iwm. Waxaa loo isticmaali karaa khamiirka digada xoolaha, dhoobada iyo qashinka, dhoobada miiraha ee sonkorta, haraaga bio-gaaska iyo balka cawska iyo qashinka kale ee dabiiciga ah.
Waa maxay Is-wadaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida
Ku Is-wadaha Groove Composting Turner Mashiin waa aaladaha halsano ee ugu horeeya, waxaa si aad ah loogu isticmaalaa warshad bacriminta dabiici ah, warshada bacriminta isku dhafka ah, dhoobada iyo warshadda qashinka, beerta qudaarta iyo dhirta bisporus si ay u khamiiriso ugana saarto biyaha. Faafinnada waxay noqon karaan 3-30 mitir dhererkooduna wuxuu noqon karaa 0.8-1.8 mitir. Waxaan leenahay nooc laba-jeexdin iyo nus-jeex jeex ah si aan ula kulanno macaamiisha baahiyahooda kala duwan.
Qalabka ceyriinka ah ee ku habboon Is-wadaha Groove Composting Turner Machine
.1. Qashinka beeraha: caws, caano digir ah, caag suuf ah, buunsha bariis, iwm
.2. Digada xoolaha: isku darka digaaga iyo wasaqda xoolaha, sida qashinka kawaanka, suuqa kaluunka, kaadida iyo saxarada lo'da, doofaarrada, idaha, digaaga, shinbiraha, berriga, ariga, iwm.
.3. Qashinka warshadaha: qamriga lees, haraaga khalka, qashinka manioc, wasakhda sonkorta, haraaga dhogorta, iwm.
.4. Haraadiga guryaha: qashinka cuntada, xididdada iyo caleemaha khudradda, iwm.
.5. Dhoobo: waa lakabka webiga, bulaacada, iwm.
Faa'iidooyinka Mashiinka Turner ee Isku-xoqidda Groove
(1) Hufnaan sare, hawlgal siman, waara, iyo xitaa nafaqeynta;
(2) Waxaa lagu xakamayn karaa golaha wasiirada gacanta ama si otomaatig ah;
(3) Bilawga jilicsan ee lagu dheereynayo nolosha adeegga;
(4) Mashiinka Is-wadaha ee 'Groove Composting Turner Turner' waa ikhtiyaari lagu qalabeeyaa nidaamka qaadista hidda-shidaalka;
(5) Ilkaha jiidaya ee waara ayaa jebin kara iskuna dari kara maaddada;
(6) Beddelaadda safarka ee safarka waxay xaqiijineysaa nabadgelyada wareejinta.
Faa'iidooyinka Qalabka Forblift Composting Qalabka
Marka loo barbardhigo qalabka leexinta dhaqanka, ayaa Mashiinka sameynta compost nooca forklift wuxuu dhexgaliyaa howlaha burburin kadib halsano.
(1) Waxay leedahay faa'iidooyinka waxtarka burbursan ee sare iyo isku darka lebbiska;
(2) Wareeggu waa mid dhammaystiran oo waqti qaadanaya;
(3) Waa mid la jaanqaadi kara oo rogrogmi kara, oo aan ku xaddidnayn deegaan ama masaafad.
Is-wadaha Groove Composting Turner Machine Video Display
Xulashada Mashiinka Mashiinka Mashiinka Isukeenista ee 'Groove'
Qoto dheer (mm)
Mashiinka ugu muhiimsan (kw)
Dhaqdhaqaaqa Mashiinka (kw)
Qaadista Mashiinka (kw)
Xawaaraha Shaqeynta (m / min)
Hore: Nooc Forklift ah Qalabka Bacriminta
Xiga: Roll Extrusion Xarunta Bacriminta Granulator
Hordhac Muxuu Yahay Haanta Gaaban ee Qashinka iyo Saxarada? Haanta Gaaban ee Qashinka & Digada Gawaarida waxay leedahay astaamaha xilliga halsano gaagaaban, oo daboolaya aag yar iyo bey'ad saaxiibtinimo. Taangiga hawo-mareenka aerobic-ka ee xiran wuxuu ka kooban yahay sagaal nidaam: nidaamka quudinta, aaladda silo, qalabka hawo-qaadista, sys hawo-qaadashada